Saaxil: Dabley Weeraro Geysatay, Shan Lahaye Oo Guddi Xukuntay, Shirar U Socda Deegaanka Iyo Ciidamo La Geeyay Gobolka | Ogaalnews
Saaxil: Dabley Weeraro Geysatay, Shan Lahaye Oo Guddi Xukuntay, Shirar U Socda Deegaanka Iyo Ciidamo La Geeyay Gobolka
Berbera(Ogaal) Dablay hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas la beegsadeen Booyad shidaal oo maraysay jidka xidhiidhiya Hargeysa iyo Berbera, balse aanuu falkaasi gaysan khasaare nafeed iyo dhaawac toona, isla markaana gudoomiyaha gobolka Saaxil ee Berbera Fahmi Cabdi Bidaar ayaa BBC u xaqiijiyay jiritaanka falkaa.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in dablay kale iyana rasaas ka rideen shalay subax wadada xidhiidhisa Berbera iyo Burco . Wuxuu intaa ku daray gudoomiyuhu inay garanayaan dhallinyarada wadooyinka ka baxa Berbera rasaasta ka riday, oo imikaba ayuu yidhi ay ciidamo booliis oo ka soo kala baxay Berbera iyo Hargeysa ay ku raad joogaan.
Dhanka kale Wadihii baabuurkaa booyadda ah ee la rasaaseeyay Cabdixakiin ayaa ka hadlay sidii wax u dhaceen waxaanuu yidhi, “Nimanku waxay ahayeen afar nin. Laba nin gaadhi bay ka soo degeen oo qoryo ayay siteen, dabadeedna anagoo aan waxba iska filayn ayay nagu yidhaahdeen istaaga oo rasaas bay nagu rideen, gaadhigana taayir taayir bay rasaas ugu rideen, Marka booyadu waxay siday shidaal isugu jiray badrool iyo naafto gaadhaysa 75 foosto.”
Shan nin oo ka soo jeeda dadka deegaanka Berbera ayaa midkiiba min hal bil oo xadhig ah ay ku xukumeen guddiga nabad gelyada ee gobolka Saaxil , sida uu sheegay guddoomiye Fahmi Cabdi Bidaar . Guddoomiyaha ayaa sababta raggaasi loo xidhay ku sheegay inay tahay iyagoo abaabul ciidan ka waday wadooyinka ka baxa magaalada Berbera. Hase ahaatee waxa la sheegayaa in nimankaa lagu haysto oo keliya inay ka soo horjeedaan qorshaha xukumaddu ku wareejisay haamaha Shidaalka, sida xukumaddu ku dooday. Siday sheegeen warar wargeyska Ogaal ka soo gaadhay magaaladda Berbera, waxa la sheegay in maxaabistaa laba ka mid ahi ay dhaawacyo ka qabaan gacanta iyo feedhaha.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in dadweynaha deegaanka Berbera badidoodu ka soo horjeedaan go’aanka xukuumaddu ugu wareejisay haamaha keydka shidaalka ee Berbera shirkado ganacsi oo aan tartan furan u soo marin , iyadoo Baarlamaankuna hore cod aqlabiyad ah uu ku diiday wareejinta haamaha shidaalka ee Berbera. Dhanka kale warar aan la xaqiijin ayaa tibaaxay, inay jiraan shirar waxgaradka deegaanku ka leeyihiin qorshahaa wareejinta haamaha. Inkastoo maamulka gobolka Saaxil uu sheegay in aanay gobolka ka jirin wax dhibaato ahi, haddana,waxay xoggaha Gobolkaa laga helayaa sheegeen in xukuumaddu gaysay gobolkaa ciidan badan oo ay ugu tala gashay inay la tacaalaan dhalinyarada dablayda ah oo looga cabsi qabo inay dhibaato ka gaystaan jidadka xidhiidhiya marsada iyo magaalooyinka waawayn ee kale ee dalka.
Rabshadaha Dablaydani samaysay ayaa imanaya iyadoo todobaadkii tagay Wasiiro uu hogaaminayay wasiirka daakhiligu sheegeen inay dhalinyaro hub la galay deegaanka Sheekh soo xero galiyeen, lana xalliyay xiisaddii ka dhalatay wareejinta Haamaha Berbera.